अग्निपरीक्षामा रेखा | Kendrabindu Nepal Online News
१२ श्रावण २०७४, बिहीबार १८:४८
दिवस गुरागाईं । काठमाडौं, १२ साउन ।
“पहिलो ‘हिरो’ फिल्म रिलिज हुँदा जति उत्साहित थिएँ , यो फिल्मको लागि म उत्तिकै उत्साहित छु । अझ भन्नुपर्दा त्यो भन्दा केही बढी ।”
आगामी कात्तिक २ गते लक्ष्मीपूजाका दिन रिलिज हुने आफ्नै लगानीको फिल्म ‘रुद्रप्रिया’को पोस्टर सार्वजनिक गर्दै मसहुर अभिनेत्री रेखा थापाले यस्तो स्टाटस पोस्ट गरेकी छन् फेसबुकमा । तीनैवटा पोस्टरमा आफ्नो अनुहारको दाहिने भाग मात्र देखाएर रहस्य छोडेकी रेखाले यस फिल्मको प्रदर्शनका लागि न्वारानदेखिको बल लगाउने संकेत पनि दिएकी छन् । मानौं यो उनको जीवनकै सबैभन्दा गतिलो फिल्म हो ।
रेखा फिल्मस्को ब्यानरमा निर्माण भएको ‘रुद्रप्रिया’को फस्टलुक पोस्टरमार्फत आइरहँदा रेखाको फेरि सिल्भर स्क्रिनमय चर्चा सुरु भएको छ । पछिल्लो समयमा राजनीतिमा जोडिएर बढी चर्चा कमाउन थालेकी उनको फिल्मी चर्चा खासै हुन छोडेको थियो । बीचमा अभिनय गरेका केही फिल्मको असफलताले पनि त्यस्तो भएको हुनुपर्छ ।
झन्डै एक दशकसम्म उनको चर्चा माओवादी र त्यसका कमाण्डर प्रचण्डसँग जोडिएर भयो । माओवादी छोडेर राप्रपा प्रवेश गरेपछि पनि एकलट चर्चा भयो नै । राप्रपाको निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य भएर उनी औपचारिक रूपमा सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश पनि गरिन् । तर जसरी स्थानीय निर्वाचनमा राप्रपा बढारियो, त्यसैगरी रेखाको चर्चा पनि शिथिल हुनथाल्यो । तर, १० साउनदेखि ‘रुद्रप्रिया’को फस्टलुकले फेरि उनको चर्चा बौराएको छ । अब यसले कार्तिक महिनासम्म धान्ने लख काट्न सकिन्छ ।
अभिनेता आर्यन सिग्देलसँग पानी बाराबारको अवस्था झेल्दै आएकी उनले एकाएक उनैलाई प्रमुख कलाकार बनाएर अघिल्ला सम्बन्धलाई झुठ साबित गरिदिएकी छन् । रेखा र आर्यनको जोडीलाई धेरैपछि दर्शकले नियाल्न पाउने छन् । यही कारण पनि उनका फ्यानहरूका लागि यो प्रतीक्षित फिल्म हुने छ ।
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा रेखा थापा जति लामो समयसम्म एकछत्र टिकिरहने अर्की अभिनेत्री कोही पनि छैन । सदाबहार, नम्बर १, अतुलनीय अभिनेत्री आदि फुँदाबाट विभूषित उनी एकपछि अर्को चर्चामा आउन सिपालु पनि छिन् ।
अभिनेत्री हुन आवश्यक परम्परागत मापदण्डको हिसाबबाट कसी लगाउँदा रेखाले आफ्नो अभिनेत्री करिअरलाई कसरी सेफल्याण्डिङ गर्ने हुन् ? यस प्रश्नको जवाफ भविष्यले दिँदै जाला । तर वर्तमानमा भने रेखाले आफ्नो फिल्म ‘रुद्रप्रिया’को सवालमा बढी नै आशा व्यक्त गरिरहेकी छन् । अर्को पनि उनको भनाइ छ, “यो फिल्म मेरा लागि विशेष फिल्म हो ।”
एक सयभन्दा बढी फिल्ममा अभिनय गरिसकेपछि उनी पहिलोपटक ठुलो स्वरले ‘रुद्रप्रिया’का लागि वकालत गर्दैछिन् । यो फिल्म सफल भयो भने उनी नेपाली फिल्मकी सदाबहार अभिनेत्री हुन् भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्ला ?
तर सफल भएन भने ? यसको जवाफ भने उनी र उनको भावी करिअरका लागि प्रिय हुने छैन ।
Prevघुस लिएको आरोपमा कार्यालय प्रमुख पक्राउ
‘मिस विश्वकर्मा’ अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको (भिडियो सहित)Next